माओवादी केन्द्रद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता! - Naya Bihani
माओवादी केन्द्रद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता!
प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०७८, बुधबार १४:४७ 70 पटक हेरिएको
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।